Itoobiya oo shaacisay inay dhammeysay buuxintii 2-aad ee Biyo Xireenka Khilaafka ka taagnaa | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Itoobiya oo shaacisay inay dhammeysay buuxintii 2-aad ee Biyo Xireenka Khilaafka ka taagnaa
War hadda soo dhacay ayaa sheegaya in dowladda Itoobiya ay shaacisay in la dhammeystiray buuxintii labaad ee Biyo xireenka weyn ee dalkaasi.
Telefishanka Itoobiya ayaa goor dhoweyd shaaciyey inay soo dhammaatay buuxintii labaad ee Biyo xireenka ‘Renaissance Dam’ oo ay si weyn uga horjeedeen dalalka Masar iyo Sudan; waxayna Masar ku hanjabtay inaysan ogolaan doonin arrintan, ayna waxyeelo ku tahay Amniga Biyaha dadkeeda.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in roobab waaweyn oo dalkaasi ka da’ay ay dedejiyeen buuxinta Biyo xireenka, iyadoo aan loo baahan biyo badan oo webiga ah.
Wasiirka Waraabka iyo Wasiirka Tamarta, Dr. Seleshi Bekele ayaa sheegay in kaydka biyo xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) uu gaaray heer kor u dhaaf ah heerka biyaha.
“Sannadkan sidoo kale waxaan la kulanay roobab aad u daran oo ka socda Wabiga Abbay (Wabiga Blue Nile). Sidaas darteed, kaydka GERD ayaa si dhakhso leh u buuxsamay ”ayuu yiri wasiirka.
GERD waa biyo xireenka quwadda korontada laga dhaliyo ee Itoobiya iyo hantida kaabayaasha dhaqaalaha ee loo ilaaliyo waddamada ka hooseeya dhanka ka soo horjeedka isbedelka cimilada. Sidoo kale waa hab lagu sii horumariyo laguna wada barwaaqoobo, weligeed daawo ma noqon karto, Dr. Seleshi ayaa xusay.
“Talaabada xigta ee dhismaha GERD waa in la xaqiijiyo jiilka hore bilaha soo socda. Hambalyo shacabka Itoobiya ”ayuu sii raaciyey.
Dowladaha Itoobiya, Masar iyo Sudan ayaa khilafkoodu gaaray Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay markii ay fashilmeen wadahadal u socday saddexda dal, waxayna Itoobiya iskeed u wadaa inay maamusho biyo xireenka khilaafku ka taagan yahay ee Renaissance Dam.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka noqday Fasax maanta la siiyey shaqaalaha, dibna ugu yeeray…
Next articleDagaalka Itoobiya oo ku fidaya Gobollada Amxaarada iyo Cafarta (TPLF oo weerar ku qaaday Oromo ku..)